Idinkaa is keenaye u Dulqaata Rasaasta
Waa hubaal in dadka soomaalida badankood ay aad uga nexeen dagaalkii aadka u ba'anaa ee dowladaha Ethiopia Kenya iyo Maraykanku ku soo qaadeen dalka Somalia iyagoo ujeedkoodu yahay in ay damiyaan nuurka islaamka ee ka ifay geeska Afrika ee dadka soomaalyeed ee muslimiinta ah ku diirsadeen.
Cadaawaddaas caqiiddada salka ku haysa ee Salibiyiinta isbahaystay ku soo qaadeen kuna qabsadeen dalka iyadoo Xabashadu wakiil ka tahay,waxay dad badan ku xambaartay in ay niyadda ka jabaan,ayna u qaataan in shacabkii iyo dalkii soomaalyeed gacan galay,waxayna ula muuqatay in aanay xitaa jiri karin rajo la isku hallayn karo.
Laakiin mar walba waxaa muuqanaysay in Gaalada dalka qabsaday waqtigoodu gaaban yahay ayna guuldarradu iyaga ku dambayn doonto,waayo shacabka soomaaliyeed marnaba ma aqbalayo,waxaana lagu yaqaannaa in uu ka dhiidhiyo dullinimada iyo sharaf dhaca,kumana sii jirto haddii cidda ay la dagaalayaan ay tahay gaalo duullaan ah oo doonaya in ay dalkooda xorta ah gumaystaan.
Farxaddoodda ma aysan qarsan gaalada dalka qabsatay,dhammaan axzaabta mucaaradka iyo kuwa Muxaafadka ee Ethiopia waxay hambalyo u direen Melles Zinawi oo ay ku bogaadiyeen tallaabada uu ku qabsaday caasimadda somalia ee Mogadishu,waxaana ay Zinawi u aqoonsadeen Waddani iyo wakiil wanaagsan oo Masiixiyadda u adeegaya ayna tahay in aan garabkiisa laga bixin.
Ciidammada la soo hoday ee sida hal haleelka ah loogu soo qubay dalka Somala,sida Sahlanna ku soo gaaray Mogadishu,waxay muddo gaaban gudohood u garowsadeen in ay khalad ahayd tallaabadii ay ku soo galeen Somalia,waxayna qireen in dhibaato xanuun badan ay cagohooda ku soo doonteen.
Maamulka Zinawi oo la dagaallanka waxa loogu yeero argagiixisada oo ay ula jeejdaan "ISLAAMKA" lacag kaga qaata Maraykanka iyo Yahuudda,waxay ka ilduufeen in lacagtu aysan askariga ku hayn karin dhul uusan u dhalan oo uu xoog ku soo galay.
Sida lagu yaqaanno ciidammada Mabda'a la'aanta dagaala durbaba waxay bilaabeen in ay is dal dalaan,waxayna lumiyeen istiraatiijiyaddii dagaal ka dibna waxa Amar kale kaga yimid Addis Ababa kaas oo faraya in ay laayaan shacabka maadaama aysan garan karin cidda la dagaallamaysa,amarkaasi waxaa ansixiyay Cali Max'ed Geeddi iyo Cabdullaahi Yuusuf oo Meles Zinawi uga wakiil ah dalka Somalia oo lala rabo in uu noqdo kilinka lixaad ee Ethipia.
Shacabka Soomaaliyeed ee Muslimka ahi dhag uma dhigin dhibta gaaraysa,waayo waxa uu ka soo daalay dagaallo jaahiliyadeed oo qabyaalad ku salaysan,hadda oo Jihaadku dhulkooda ugu yimidna waxaa caqligu keenayaa in ay dulqaataan oo ay u qaybsamaan Shuhaddo iyo Mujaahidiin.
Gaalada gumaysi doonka ah ee Xabashida oo ka dhigan xaabo maraykanku ku sii hurinayo Somalia oo uu ku hunjoobay sagaashamaadkii,iyagoon muddo dheer joogin,waxay u dul qaadan waayeen dhirbaaxooyinka mujaahidiinta, waxaana ku soo xirmay dhammaan waddooyinkii,waxa ay maciin badeen in ay badda koraan si ay uga badbaadaan dagaalka Masiirka ku salaysan ee ay sida dullinimada ah u galeen,markii ay sida gardarrada ah u soo weerareen dalka Somalia oo diinta islaamka ku dhaqmaya.
Guuli waa midda cadawgaaga gaalka ahi kuu qiree,waxay dani ka fursan wayday in xabasho injirreey inta xaraashato dareeskii ciidan qorigiina qiima jaban uga iibsato Muqdisho si kuwooda haray loogu laayo ay doomo ka raacdo Xeebaha Somalia,si ay Yeman uga raadiyaan nolol aan xabbad lahayn.
Mid ka mid ah askartaas Yamen tahriibka u aaday oo u warramay wargagyska Al Ayyam ee ka soo baxa dalka Yemen,waxa uu yiri" Waan ka adkaannay Maxkamadihii Islaamka ee Muqdisho laakiin waan u dul qaadan waynay rasaasta xanuunka badan ee xaafadaha Muqdisho,sidaasi darraaddeed waxaan maciin badnay in aan Yemen u soo tahriibno".
Qisooyinka warbaahinta u soo gudba waxaa ka badan kuwa la qariyo maalin kasta ayayna goostaan iyaga oo guutooyin ah ciidammada gumaysiga ee Xabashidu,Somalia oo kaliyana ma ahan ee waxaa sidoo kale amar diiddo Xooggani ka jiraa gudaha Ethiopia,waxaana Wasaaradda Warfaafina Ereeria shalay laga soo xigtay in ay dalkeeda soo gaareen 7 sarkaal oo ciimammada Ethiopia ka soo goostay oo isugu jira Tigree Amxaaro iyo Oromo,arrinaasina waxay daliil cad u tahay in taliska Zinawi darafyada ka soo gurmayo uuna sii licayo.
Soomaalida haddaba waxaa la gudboon in ay isu garabsadaan in ay gaalada dalkooda qabsatay la dagaallamaan,oo ay libtana is dhaba dhigtaan.
Ilaahayna waxa uu la jiraa kuwa Sabra iyo dullmanayaasha intaba ay ilaahay ku kalsoonyihiin.